Kwehlile ukuqashwa kwabantu - Adcorp | isiZulu
Kwehlile ukuqashwa kwabantu - Adcorp
Kuzolahleka imisebenzi emapulazini
Sehlile isibalo sabangasebenzi eSpain
Johannesburg - Kwehlile ukuqashwa kwabantu eNingizimu Afrika, ngenyanga kaJanuwari, kusho umbiko wocwaningo lwabakwa-Adcorp Employment Index.
Umbiko wesitatimende somcwaningi uLoane Sharp, uthi izibalo zokuqashwa kwabantu zehle ngo-3.2% ngenyanga kaJanuwari.
"Ukulahleka kwemisebenzi kwenzeke kuyona yonke imikhakha kulaba abayitoho kwathi kulaba abasebenza ngokugcwele kwehla ngo-5.3%, nokusho ukuthi kulahleke imisebenzi engu-40 232," kusho isitatimende.
"Izibalo ezihlanganisiwe zithi bangu-80% abantu abalahlekelwe wumsebenzi ngenyanga eyedlule."
Izibalo ziyaqhubeka zithi abantu abalinganiselwa ku-30%, bahlulekile ukudalula izimali zabo kwbaakwaSA Revenue Service (Sars), kanti abanye bakhipha imininingwane engasilo iqiniso ngamaholo abo, ngesikhathi kwenziwa izibalo zakwaStatistics SA.
"Umbiko wabaqoqi bentela uthi abantu abasemazingeni amukelekile empilo, bahola isamba esingu-R266 641 ngonyaka, nokho ezibalweni zakwaStats SA abantu bathi bahola isamba esingu-R193 325 ngonyaka, okuyisibalo esingaphansi ngo-28%."